Sida loo Xulo Xalka otomatiga iibka | Martech Zone
Talaado, July 15, 2014 Isniin, November 9, 2020 Jenn Lisak Golding
In kasta oo suuqleyda ay lahaan karaan xulashooyinka ugu badan ee xilligan la heli karo, haddana warshadaha kale waxay ku sii qulqulayaan goobta otomaatiga ah si nolosha iyo shaqooyinka looga dhigo mid fudud. Adduunyo badan oo kaamil ah, ma maamuli karno wax walba oo taas macnaheedu sidoo kale waa hawlo maamul oo fudud oo mar uun xisaabtami jiray 20% ee maanta.
Tusaalaha koowaad ee mid ka mid ah warshadaha qaadaya boodboodka weyn ee aaladda otomaatiga ah waa gudaha iibka; sida iska cad, Salesforce.com wuxuu ahaa ciyaaryahan weyn muddo dheer, laakiin codsiyada kale, marka laga reebo CRMs, ayaa soo ifaya oo isku dayaya inay noqdaan xalalka SaaS ee kooxda iibka. Ujeedada xalalkani maahan oo kaliya in otomatiga loo dhigo howlaha maamulka, laakiin waxaa loogu talagalay inay sidoo kale ku siiyaan hadhuudh wanaagsan Analytics in ku siin karaan sirdoonka ganacsiga iibka (SBI) galay:
Markii rajadu ku jirtay.
Sidee rajadu u hawl gashay.
Waa maxay tabta iyo garashada ay tahay in loo shaqeeyo si loo gaaro natiijooyinka ugu fiican.
Macaamiilkeenna iyo kafaala-qaadeena, 'Salesvue', wuxuu runtii ahaa mid ka mid ah hormuudka ka ah goobta otomaatiga iibka, waxayna sii wadeen inay ka caawiyaan macaamiishooda inay ka dhigaan kooxaha iibkooda wax soo saar badan. Hawlaha maamulka laga bilaabo xusuusinta, softiweerkoodu wuxuu u fududeynayaa kooxaha iibka inay diirada saaraan iibinta halkii ay ka buuxin lahaayeen CRM-kooda.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah xallinta otomaatiga iibka asalka ah, waxay ku sameeyeen macluumaad ku saabsan Sida loo Xulo Xalinta otomaatiga Iibka, bixinta liis faahfaahsan oo ah waxyaabaha la tixgelinayo markii la isku dayayo in loo helo xal SaaS ku habboon kooxdaada.
Hadda ma isticmaashaa xalka otomaatiga iibka? Hadday sidaas tahay, kee? La wadaag fikradahaaga ama khibradahaaga qaybta faallooyinka ee hoose. Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan kabarato Salesvue, guji hoos:
Tags: Content Suuqsirdoonka macaamiishaMacluumaadka Suuqgeyntaotomaatiga iibkasirdoonka ganacsiga iibkawaxyaabaha iibka ahKordhinta Iibkaiibka infographiciibka infographicsSBI
Jul 15, 2014 markay ahayd 10:03 AM
Faahfaahin weyn - Ma aanan ogeyn sida iibka gudaha uu u kordhayay!